सागका लागि सातै राष्ट्रबाट ‘कन्फरमेसन’ आयो ! :: Setopati
सागका लागि सातै राष्ट्रबाट ‘कन्फरमेसन’ आयो !
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सागमा सहभागिताका लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई सरकारले पत्राचार गरिसकेकाले निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुने बताएका छन्।
खेलकूदका भौतिक पूर्वाधारको अभावमा साग नरोकिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “दुई/चार दिन यताउता पर्ला तर समयमै भौतिक संरचना निर्माण हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। राष्ट्रकै इज्जतको विषय भएकाले पनि साग भव्य र सभ्यरूपमा सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व हो।”
आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र सबै संरचना निर्माण भइसक्ने र आयोजक राष्ट्र नेपाल भएकाले तयारी सम्बन्धमा कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँले स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिनाले काठमाडौँ र पोखरामा हुने सागमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आफूहरु दत्तचित्त रहेको बताए।
पोखरा रङ्गशालाका लागि बजेट अभाव नहुने र निश्चिन्त भएर काम अघि बढाउन उहाँले परियोजना प्रबन्धक दीपक बराललाई निर्देशन पनि दिए।
टोलीले पोखरा रङ्गशालाको फुटबल स्टेडियम, क्रिकेट मैदान, आर्चरी, कभर्डहललगायतको अनुगमन गर्नुका साथै खेलसम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। टोलीले सागका लागि पोखरामा तयारी गरिरहेका पुरुष–महिला ह्याण्डबल टोलीसँग तयारीबारे जानकारी लिएको थियो।
टोलीले यसअघि पोखरा–२५ हेमजास्थित निर्माणाधीन फुटबल मैदान, पोखरा–१९ को गोष्तेघाट, सराङकोटलगायतका स्थानमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधारको अनुगमन गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ८, २०७६